Tari-dalana Toriteny Alahady 08 Janoary 2017 (Alahady Voalohany manaraka ny EPIFANIA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika nahavita soa ny fankalazana ny Taombaovao sy ny Epifania. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana fohy momba ny texte izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha 08 Janoary 2017 ho avy izao (Alahady I manaraka ny Epifania). Mirary soa indrindra tompoko.
Alahady manaraka ny Epifania ity Alahady faha 08 Janoary ity. Araka izany dia mbola mifandray ara-poto-kevitra amin’izany Epifania izany. “Jesosy Kristy sy ny Fampianarany: fihariharian’ny voninahitr’Andriamanitra”, raha fintinina amin’ny fehezanteny anankiray dia izany no azo amintinana ity tenin’Andriamanitra anjarantsika ity.
Voalohany, mpampianatra IRAKY ny Ray Izy. Ny matoanteny fototra πέμψαντος (participle aorist active genitive of πέμπω, eng. to send) dia tsy milaza fanirahana ihany fa manondro ihany koa ny toerana izay nivoahany (genitif d’origine, de source) tamin’izany fanirahana Azy izany. Izany hoe, tsy mampiharihary ny voninahitr’Izay naniraka Azy ihany Izy fa maneho izany ao Aminy koa satria avy ao amin’Izay naniraka Azy izay no nivoahany: fehiny manana ny voninahitr’Izay naniraka Azy Izy dia ny voninahitra maha Andriamanitra izany.
Ny mahita ny voninahitr’Andriamanitra ao amin’i Jesosy Kristy no mahatakatra ny maha feno sady maha marina (tsy sandoka) ny fampianarany, ny mahatakatra ny fahamarinan’ny fampianarany no mahalala ny sitrapon’Andriamanitra ny amin’ny olona. Inona ny sitrapon’Andriamanitra ny amin’ny olona? Teo afovoan’ny herinandro izay fankalazana ny Androm-Panavotana lehibe (ampit. Lev 23:26) no nanaovan’i Jesosy izany fampianarany teo an-kianjan’ny Tempoly izany. Ny Androm-Panavotana Lehibe no nidiran’ny Mpisoronabe indray mandeha isa-taona tao amin’ny Masina Indrindra ka nanaovany ny Fanati-panavotana ho an’ny olona rehetra. Ny fampianaran’i Jesosy dia nokendreny indrindra mba hahazoana mpianatra, izany hoe, olona tsy mandray sy miaina ihany amin’ny fampianarany fa olona miombom-piainana Aminy indrindra koa. Izany fiombom-piainana Aminy izany noho ny tena Fanavotana Lehibe ho an’ny olona. Ny mandray ny fampianarany sy miombom-piainana Aminy no ho avotra amin’ny lozan’ny fahafatesana mandrakizay izay mananontanona azy noho ny fahotany fa hanana ny fiainana mandrakizay kosa.
Voarakitra ao amin’ny Baiboly izany teny marin’i Jesosy maneho ny voninahitra maha Andriamanitra Azy izany. Tsy izay teo amin’ny kianjan’ny Tempoly ihany no tiany ampianarina izany fa izay rehetra momba ny Tempoly Vaovao rehetra koa, dia ny Fiangonana Kristiana izany. Ny mahita ny voninahitr’Andriamanitra ao amin’izany teniny izany no mahatakatra koa ny fahamarinan’izany ka handray izany ho fiainany hahatanteraka eo aminy ny fanavotan’Andriamanitra azy avy tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon’ny sasany àry satria ao amin’ny Fiangonana irery ihany, izay itoriana madio sy ampianarana ny teniny ary izarana marina ny Sakramentany, no ihaonantsika amin’i Jesosy sy ny fampianarany hahatonga ny asam-panavotany ho tanteraka eo amin’ny fiainantsika.
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena!